Anis Wallaggaadha: Dubbiin Wallaggatti tahaa jiru mormuun waanuma Oromiyaa guutuu irraa eegamuu dha!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAnis Wallaggaadha: Dubbiin Wallaggatti tahaa jiru mormuun waanuma Oromiyaa guutuu irraa eegamuu dha!!
Anis Wallaggaadha : Dubbiin Wallaggatti tahaa jiru mormuun waanuma Oromiyaa guutuu irraa eegamuu dha! Sagalee waliif tahaa! Kaayyoo qoqqoodinsa mootummichaa fashalsaa!!
Naannoo AMHAARAA waraannii ASAAMINNOO mootummaa naanichaa fii qondaaltota moottumma ajjeesuun hedduun baqatanii BOSONA naannicha galanii biyyattii goolaa jiranittii, KOMAAND POSTIIN guyyaa tokkoofiyyuu hin labsamne.
NAANNOO TIGRAAY Kan silaa sadarkaa duraa irratti KOMAAND POOSTIIN labsamee, yakkamtootaaf qabeenya Biyyaa too’achuuf waraannii labsamuu qabu dhiisanii, OROMIYAA qofa shibireessuun diinummaa guddaa Saba oromootti garsiisuudha.
Gochaaf labsiin waraana isaanii daranuu Saba oromoo cimsuun Kan WBO faana Saba hiriirsaa jiran ta’uu hin beekan.
WARAANNII MOOTUMMAA meeshaa waraanaa qabuu hundaa guutatee, WBO waliin LOLUUN hanga danda’aniin WBO ajjeessuuf bakka isaan jiraniitti lolaan Wal falmuun hanga fedhan ajjeesanii hanga fedhan madeesuu nidanda’u.
Sababbiin isaas WBOn lolee akka gootaattii wareegamuun Saba oromoo BILISOOMSUUF jalqabumaa goottan murteefatanii, Lola seenan waan ta’eef.
“Wanti sabni iyyee lolaa jiruuf UUMMATA NAGAYAA ADAMSANII AJJEESUU irraa goraatii, WBO bosona jiru waliin dhaqaa falmaa “. Jechuun Kan iyyaa jiraniidha..
Mootummaan kunuu erga dhufee boohicha oromoo cimee dhufe malee, oromoo boqotee guyyaa takka nagayaan dabarsee waan hin jirreef, mootummaa diinaatti jechuun haqa jirtu dubbachuu malee , maqaan laannuuf hin jiru.
Goobanaa bara sanaa irraa maaltu adda isa godharee?
Inni dhaaba siyaasaa biyya Amhaara (ADP) waliin gamtaa ijaarratee( walitti baqee), angoo jijjiramaa nafxaanyaaf (ADP) qoodeef kun maaliif dhaaba siyaasa Oromoo waliin gamtaa uumuun, angoo hojii(hangoo sabaa) waliif qooduun waliin hojjachuu dadhabe?
Goobanaa bara kanaa isa qillixxi ta’eet malee akkamiin of jibbe, akkamiin of dide?
Kan obboleessa hin feene, obbolleettii hin feene, lammii isaa fixee fi ficcisiisee, kan aadaa saba isaa dhiisee, aadaa alagaa qofa guddisaa jiru, kan gosa fi lammii isaa afaan qawweetiin waraanee dirqiin alagaaf harka keennachiisuuf hojjataa oolee bulu kun, goobanaa bara sanaa malee maal inni ree?
Maaltu Goobanaa bara sanaa irraa adda isa godha?
Barreessaan: Shifarraa Guddataa
Asallaa: Qeerroon Asallaa dararaan Uummata Wallaggaa irraa haa dhaabbatu Jechuun Hiriira bahanii sagalee dhageessisaa jiru.